Ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah waa mid fudud: heerarka taageerada / heerarka iska caabinta. Qeybta 2. | vfxAlert official blog
Ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah waa mid fudud: heerarka taageerada / heerarka iska caabinta. Qeybta 2.
Sida ku xusan qaybta hore , heerarka dhismuhu waa geedi socod hal abuur leh, ganacsade walbana wuxuu ku arkaa wadadiisa u gaarka ah isla shaxdan. Laakiin sidoo kale waxaa jira habab caadi ah oo ku saabsan sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada laba-geesoodka ah ee loo isticmaali karo in lagu go'aamiyo taageerada / iska caabbinta, taas oo siinaysa faa'iido xasilloon hanti kasta oo ganacsi. Kuwa ugu caansan waa kuwa soo socda:
Xisaabinta waxaa loo sameeyaa ugu badnaan / ugu yaraan iyo furitaanka / xiritaanka muddadii hore. Sida ficil ahaan loo muujiyo, qiimaha aagga Pivot wuxuu sameeyaa isbeddello fiiqan, isbeddelkuna gabi ahaanba wuu soo jeesan karaa. Saddex algorithms xisaabinta ayaa loo isticmaalaa:
Caadiga ah . Heerka dib u noqoshada waxaa lagu go'aamiyaa wadarta qiimaha ugu dambeeya, hooseeya, iyo xiritaanka ka dibna loo qaybiyo 3. Saddex heer oo taageero / iska caabin ah oo kaabayaal ah ayaa sidoo kale la xisaabiyaa;
Camarilla . Habka waxaa soo saaray ganacsade Nick Scott sanadkii 1989-kii, si ka duwan Pivot-ka caadiga ah, wuxuu si fiican uga shaqeeyaa ka ganacsiga intraday iyo M15-H1 waqtiga;
Midpivots . Ikhtiyaarka waqtiga M1-M10. Waxay bixisaa calaamado badan oo ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo bilaash ah , sidaas darteed xaqiijin dheeraad ah ayaa loo baahan yahay.
Inta lagu jiro maalinta ganacsiga, qiimaha ayaa laga yaabaa inuu ka gudbo Pivot Point dhowr jeer waana ay ka fog tahay hubaal in tani ay noqon doonto bilowga isbeddel cusub. Waxaad ubaahantahay inaad eegto isku dhaca heerarka waqtiga sare, xogta tilmaamayaasha farsamada, calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee saxda ah iyo habeynta xilliga xisaabinta astaamaha hantida.
Heerarka sixitaanka Fibonacci
Waxaa loogu magac daray xisaabiye Leonardo Fibonacci oo abuuray isku xigxiga tirooyinka, taas oo tirada soo socota ay tahay wadarta labadii hore, oo leh saamiga 1,618 iyo qiimihii hore.
Jebinta ama dib uga soo kabashada Fibonacci taageerada / iska caabbintu waxay siisaa calaamad lagu kalsoonaan karo ee sii socoshada ama dib u noqoshada. Hababka loo adeegsado xeeladaha waxaa si faahfaahsan loogu sharraxay suugaanta iyo goobaha gaarka ah, sidaa darteed kuma dul dagi doonno iyaga oo faahfaahsan.
Markuu ka ganacsanayo suuqyada maaliyadeed, ganacsaduhu wuxuu marka hore falanqeeyaa halka qiimaha uu aadi doono, su'aasha ah goorma ayuu ka guuleysan doonaa heerarka xisaabiya ma aha sidaas muhiim. Laakiin waqtiga waqtiga ayaa sidoo kale muhiim ah, gaar ahaan marka laga ganacsanayo mustaqbalka iyo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo leh bisayl go'an (dhicitaan), kaas oo ay la socdaan dhaqdhaqaaqyo adag oo ka socda suuqa Forex.
Istaraatiijiyaddii ugu horreysay ee salka ku haysay waqtiga ayaa ahayd aragtida Gann, taasoo saadaalisay dhaqdhaqaaqa suuqa iyadoo la adeegsanayo "laba jibbaaran waqti-go'an" iyo arrimo badan oo la xiriira laga bilaabo wajiyada dayaxa ilaa booska xiddigaha. Gunn oo keliya ayaa ogaa sida tan loo sameeyo, iyo qof kasta oo kale oo ku jira istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh , qaabkiisu aad buu u adkaa. Heerarka xisaabeed ee Murray waxay fududeynayaan howshan waxayna kuu oggolaaneysaa inaad ka ganacsato adoon lahayn "suugaan" dheeraad ah.
Waxaa la isticmaalay 8 jeer (heerar), oo uu ugu yeeray qoraaga "Octave":
[4/8]. Isudheellitirka heerka xisaabinta, taas oo ay ugu wanaagsantahay in boos laga furo. Haddii qiimaha la hagaajiyo ka sarreeya, waxay noqon doontaa taageero xoog leh, iska caabin hoose. Waxaa si gaar ah muhiim u ah in la hubiyo in burburka uu sax yahay iyo in laga helo xaqiijin calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo toos ah .
[8/8] - [0/8] . Kala duwanaanshaha ugu weyn ee ka soo noqoshada ama hagaajinta isbeddelka hadda jira uu ka bilaaban karo. Isku halaynta heerka ayaa sii kordheysa haddii ay isku aag ku wada jiraan waqtiyo kala duwan. Waxa kale oo jiri kara mudo dheer oo xoojin ah kahor jabinta ama soo kabashada.
[7/8] - [1/8] . Haddii qiimuhu ku istaago aagaggan, waxaan fileynaa dib u soo celin xoog leh oo ku saabsan khadka isku dheelitirka. Markuu burburo dhacdo, dhaqdhaqaaqa ayaa sii socon doona illaa [8/8] iyo [0/8].
[6/8] - [2/8] . Heerar xoog leh oo sixitaan ah oo laga keenay aagagga xad dhaafka ah. Astaamo ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar sare leh leh ayaa badanaa ka muuqda iyaga.
[5/8] - [3/8] . Qeybtaan, hantidu waxay kubixisaa ugu yaraan kalabar waqtigeeda ganacsi. Murray wuxuu rumeysan yahay in suuqa uu ku sugan yahay xaalad aan la hubin, haddii qiimaha si kastaba ha ahaatee uu uga soo gudbo xuduudaha, markaa waxay u badan tahay inuusan dib u soo laaban doonin.
Haddii jaantusku ku dhaqaaqo inta u dhexeysa wax ka badan 10-12 baararka, raadi fursad aad ku furto booska ka soo horjeeda, haddii kale, waxaan ku darnaa isbeddellada.
[-1/8] и [+1/8] . Heerarka "Xad-dhaafka ah" ee taageerada iyo iska caabinta, burburinteedu waxay macnaheedu noqon kartaa dhammaadka isbeddelka hadda socda. Laakiin, sida tirakoobyadu muujinayaan bixiyaha calaamadaha binary ee ugu fiican , sidoo kale waxay u badan tahay in tani ay tahay uun sixitaan dhaqdhaqaaqana uu sii socon doono.
[-2/8] и [+2/8] . Taageerada / iska caabinta "kama-dambaysta ah" , iyo haddii qiimuhu ku jabo heerarkan, dhaqdhaqaaqa ayaa u sii socon doona dhinaca burburka oo dhaqdhaqaaq xoog leh ayaa u horseedi kara dib-u-soo-celinta "Octave".
Tusaalooyinka istaraatiijiyadaha calaamadaha binary ee leh heerarka taageerada / iska caabinta:
Xeeladaha VfxAlert ee bilowga ah
Celceliska u guurista sida istiraatiijiyadda ugu wanaagsan ee ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee loogu talagalay dadka cusub ;
Strategy Pathfinder - waxaan ka ganacsanaa guri siman iyo dib u rogis ;
5 daqiiqo xulashooyin leh istiraatiijiyad Everest ;
Isticmaalka heerarka taageerada iyo iska caabinta xulashooyinka binary
Hawsha ugu weyn iyo isla mar ahaantaana ay adkaato istiraatiijiyad kasta oo ka shaqeysa heerarka sicirka ayaa ah in la go'aamiyo runta burburka "barta isudheellitirka". Markuu jabku dhaco, sicirka ayaa bilaabi doona dhaqdhaqaaq cusub ama sii wadi doona hadda iyadoo suurtagal hooseysa in lagu laabto qiimayaashii hore. Xaaladda ka soo horjeedda, markii shaxdu ka leexato heerka, waxaad geli kartaa sixitaan ama waad ka maqnaan kartaa suuqa, adoo filanaya dhaqdhaqaaq xoog leh.
Haddii qiimuhu sameeyo dhowr jebin oo been ah (dib-u-tijaabin), tani macnaheedu waa heerkaas runti waa mid muhiim ah oo suuqa ayaa u baahan inuu sameeyo dadaal badan si looga gudbo. Iyo sida had iyo jeer, qaanuunka ayaa shaqeynaya: waqti go'an oo weyn, signaal lagu kalsoonaan karo.
Astaamaha burburka "runta ah":
Shumaca burbura wuxuu xiraa wax aad uga sareeya / ka hooseeya heerka waana ka fiican yahay haddii uusan si buuxda u taaban, oo ay ku jiraan hoosku;
Inta badan tilmaamaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah waxay aaminsan yihiin in dhammaan hantida ganacsiga, calaamaddu ay noqoto mid la isku halleyn karo haddii masaafada u jirta heerka illaa qiimaha xiritaanka shumaca aysan ka yareyn celceliska isbeddelka hantida ee xilliyadii 3-5 ee la soo dhaafay;
Ma jiro dhaqdhaqaaq xagga dambe ah oo ugu yaraan 3-4 shumacyo burburka ka dib - waxaan u qaadan karnaa in jaantusku aakhirkii jabiyay heerkii qiimaha. Fursadaha dhexdhexaadka iyo muddada-dheer, muddada xakamaynta waa inay ahaataa ugu yaraan 2-3 saacadood.
Marka la xaqiijinayo mugga, xitaa mugga sax, waa inaan la soconnaa dhaqdhaqaaqa isbeddelladooda kahor, inta lagu gudajiro dib-u-eegista, iyo isla marka burburka ka dib. Iyadoon la helin kororkooda fiiqan, heerarka taageerada / iska caabinta sidaas ma ahan waxayna matalayaan qaraxyada soo socda ee mala-awaalayaasha sameeya suuqa iyo calaamadaha ganacsiga ee ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee been abuurka ah .
Aan u gudubno burburka beenta ah. Tani waa bixitaanka xigashooyinka ka baxsan heerka, oo ay ku xigto dib ugu noqosho deg deg ah qiimaha asalka ah ee 2-3 shumacyo. Waxaa jira dareen "lo '" ah oo ka mid ah ciyaartoy yaryar oo isku dayaya inay lacag ka helaan dhamaadka isbeddelka ama aan fahmin dheelitirka dhabta ah ee xoogagga iyada oo aan lagu samayn falanqeyn ku saabsan ganacsiga ganacsiga binary . Sidaa darteed, macaamilku wuxuu ku dhammaadaa khasaaro, sida kuwa suuqa sameeya oo kale.
Waa kadib dib-u-eegisyo been ah oo dhowr ah iyo jabitaanno soo noqnoqda - iyo isbeddellada muddada-dheer ah ee la sameeyay, iyo taageerada bilowga iyo heerarka iska caabinta ee Murray, Fibonacci ama Pivot ayaa la sameeyay. Ganacsatada khibradda leh ayaa isku dayi kara inay furaan ikhtiyaarro yar yar oo ikhtiyaari ah "oo ka dhan ah dadka badan" sida muddada gaaban.
Astaamaha jabsiga beenta ah:
Waa lagama maarmaan in la helo isbeddello iyo heerar ugu horrayn ku saabsan mowduucyo dhaadheer oo la xidhiidha kan hadda jira. Tusaale ahaan, waxaa jira dhaqdhaqaaq xoog leh saacadda, iyo marka loo beddelayo kala-gooyo yaryar, jabitaannada ayaa bilaabmaya in la fiirsado, markaa waxaan u qaadan karnaa mala-awaal ah inaan "cidhiidhiyo" ciyaartoy yaryar.
U fiirso jaantuska qaababka loo sameeyay isla marka la jabo / dib u noqoshada: "Doji" shumacyo, "Madaxa-garbaha", "Labo Gunta / Sare", meesha ugu muhiimsan ee had iyo jeer ay ka jirto isku soo wada duuboo xiisaha furan. Tani waa halka ugu weyn ee jabinta beenta ah ay sabab u tahay iskahorimaadka danaha iibsadayaasha / iibiyeyaasha, oo dhaliya fursado gaagaaban iyo xoog kale oo suuqa lagu soo celiyo;
Istaraatijiyadaha muddada-dheer iyo muddada-dheer iyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah ee calaamadaha Forex , hubi in qiimaha jebinta uu ka sarreeyo / ka hooseeyo maalintii hore;
Haddii taageerada / iska caabbintu ay soo go'do markii khilaaf jiro, tusaale ahaan MACD, had iyo jeer waa jabitaan been ah.
Aynu soo koobno : n dhib malahan xeeladaha la istcimaalo ama calaamadaha binary otomaatigga ah , ganacsatada oo dhami waa inay awoodaan inay helaan oo ay u isticmaalaan heerarka taageerada / iska caabinta si sax ah. Waxay muujinayaan makaanikada "qarsoon" suuqa waxayna siinayaan fursad ay lacag ku kasbadaan halka kuwa kale ay ku helaan kaliya khasaaraha.